Yintoni iVPN? Ukhetha Njani Inye? | Martech Zone
Yintoni iVPN? Ukhetha Njani Inye?
NgoLwesibini, Julayi 14, 2020 NgoLwesine, Julayi 16, 2020 Douglas Karr
Iminyaka, bendicinga ukuba ukuba ne-ofisi kutyalo-mali olulungileyo… oko kunika abathengi bam ingqiqo yokuba ishishini lam lizinzile kwaye liyimpumelelo, linika abaqeshwa bam kunye neekhontraktha indawo esembindini, kwaye ibiyinto endizidlayo ngayo.
Inyani yayikukuba abathengi bam khange bayityelele iofisi kwaye, njengoko ndaye ndanciphisa uluhlu lwam lwabathengi kwaye ndonyusa isiphumo kulowo nalowo, ndandisoloko ndisebenza ngakumbi kwaye iofisi yam yayihlala ingenanto ixesha elininzi. Ibiyindleko enkulu leyo ... indawo yeofisi ibiza kakhulu kunokubambisa.
Ngoku ndisebenza phakathi kwamaziko endisebenza nawo, izikhululo zeenqwelo moya, iihotele, iivenkile zokwenza ikofu, kunye nendawo endisebenza kuyo nabathengi bam. Omnye wabathengi bam wandinika nesikhululo sam endiza kusebenza kuso.
Ngelixa abathengi bam begcina inethiwekhi esempilweni evaliweyo eluntwini, ayifani neendawo ezisebenza kunye neevenkile zekofu. Inyani yile yokuba uninzi lwezo nothungelwano ekwabelwana ngazo zivulelekile ukuba zithathe ingqalelo. Ngeziqinisekiso kunye nepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda endisebenza kuyo imihla ngemihla, andinakho ukubeka umngcipheko kunxibelelwano lwam ukuba luvuleleke eluntwini. Kulapho Inethiwekhi yabucala eyiyo udlala.
A VPN, okanye intanethi yangaseseItonela ekhuselekileyo phakathi kwesixhobo sakho kunye ne-intanethi. Ii-VPNs zisetyenziselwa ukukhusela ukugcwala kwi-Intanethi ekuthandeni, ukuphazamiseka, kunye nokunyanzelwa. Ii-VPNs zinokusebenza njengommeleli, ekuvumela ukuba ugqume okanye utshintshe indawo okuyo kwaye ujonge iwebhu ngokungaziwa naphi na apho ufuna khona.
Ukuhamba ngokweenkcukacha ukuba yintoni iVPN, unokufuna nokujonga isifundo esisebenzisanayo sikaSurfshark, Yintoni iVPN?
Kutheni usebenzisa iVPN?
Ngokuqinisekisa ukuba lonke unxibelelwano lwe-Intanethi lubhalwe ngokufihlakeleyo kwaye luthungelwe kwezinye iindawo, kukho izibonelelo ezininzi zokusebenzisa Inethwekhi yangasese yangasese:
Fihla i-IP kunye nendawo okuyo -Sebenzisa iVPN ukufihla idilesi ye-IP kunye nendawo kwindawo ekuyiwa kuyo kunye nabagculi.
Bethela imdibaniso wakho -I-VPN ezilungileyo zisebenzisa ukubethela okuqinileyo kwe-256-bit ukukhusela idatha yakho. Bhrawuza kwiindawo ezine-Wi-Fi ezinje ngezikhululo zeenqwelo-moya kunye neefestile ezazi amagama akho okugqitha, ii-imeyile, iifoto, idatha yebhanki kunye nolunye ulwazi olubuthathaka alunakubonwa.
Bukela umxholo naphina -Sasaza yonke imiboniso bhanyabhanya kwi-HD evutha ngokukhawuleza kuyo nayiphi na isixhobo. Silungiselele inethiwekhi yethu ukubonelela ngesona santya siphezulu singenamida ye-bandwidth. Khuphela nantoni na ngemizuzwana, kunye nengxoxo yevidiyo kunye ne-buffering encinci.
Vulela iiwebhusayithi ezihloliweyo -Vula ngokulula iisayithi kunye neenkonzo ezinjenge-Facebook, i-Twitter, i-Skype, i-YouTube, kunye ne-Gmail. Fumana into oyifunayo, nokuba uxelelwe ukuba ayifumaneki kwilizwe lakho, okanye ukuba usesikolweni okanye kwinethiwekhi yeofisi ethintela ukufikelela.
Akukho kugadwa -Misa ukujongana noorhulumente, abalawuli benethiwekhi, kunye ne-ISP yakho.
Akukho kujoliswa kwindawo ekujoliswe kuyo Ngokufihla idilesi ye-IP kunye nendawo, i-ExpressVPN yenza kube nzima kwiindawo kunye neenkonzo ukuhlawulisa amaxabiso aphezulu okanye ukubonisa intengiso ejolise kuyo ngokusekwe kwindawo. Kunqande ukubiza imali eninzi ngenxa yeholide okanye iodolo ekwi-intanethi.
Ngenxa yokuba i-VPN ifihla idilesi yam ye-IP kunye nendawo, ikwabonelela ngendlela entle yokuvavanya iisayithi zabaxumi bam ukuqinisekisa ukuba iindwendwe ezingaziwayo zifumana amava omsebenzisi afanelekileyo.
Uyikhetha njani iVPN
Ayizizo zonke iinkonzo zenethiwekhi zabucala eziyilelweyo ezilinganayo. Kukho izizathu zokukhetha enye ngaphezulu kwenye. Ngamakhulu ababoneleli abohlukeneyo, ukufunda i- Uphengululo lweTunnelbear nokukhetha eyiyo kuthetha ukufezekisa ulungelelwaniso olululo phakathi kweenkonzo, ukusebenziseka lula kunye namaxabiso.
Iindawo Zendawo -Ukuba ufikelela kwi-Intanethi usebenzisa iVPN, zonke iipakethi zedatha ezivela kwiseva ekude zisiya kwikhompyuter yakho okanye isixhobo esiphathwayo kufuneka zidlule kwiiseva zomboneleli wakho weVPN. Ukusebenza okuphezulu, khetha iVPN yeePC ezineseva kwihlabathi liphela. Ewe izithembiso ze-VPN malunga nokufikelela kwihlabathi akuqinisekisi ukusebenza ngokugqwesileyo, kodwa luphawu olubalulekileyo lokuba izibonelelo zomboneleli zihambile kwaye ziyakwazi ukuhambisa ukusebenza okuphezulu.
bandwidth -Amashishini amaninzi abonelela ngeVPN yangaphakathi. Ukuba banenqwaba ye-bandwidth, kumnandi oko. Nangona kunjalo, ukusebenza ngeVPN engenawo amandla kuya kunciphisa wonke umntu oxhunywe kuyo ekukhanyeni.
Inkxaso yeMfono -Ulungelelwaniso lweVPN olusetyenziselwa ukuba yintlungu, kodwa iinkqubo zokusebenza zale mihla zidibanise amandla eVPN. Qiniseka ukuba usebenza nenkonzo yeVPN enezinto zombini ezihambelana nedesktop kunye neselfowuni.
imfihlo -Uya kuhlala uyazi ngokuqinisekileyo ukuba umboneleli wakho akaqokeleli okanye abelane ngolwazi lwakho kwaye akalandeleli msebenzi wakho. Gcina ukhumbula ukuba isithembiso sokugcina imfihlo ngokupheleleyo kunye neejenali zero akuthethi ukuba kuyenzeka ngokuqinisekileyo. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, kubekho amanyundululu amaninzi kuthungelwano. Kuyacetyiswa ukuba ukhethe i-VPN ye-PC kumboneleli ongaphantsi kwayo hayi eYurophu okanye eMelika.
isantya -I-VPN eziphezulu zikhusela ubumfihlo bakho, kodwa zikuvumela ukuba uqhubeke nokwenza into oyithandayo kwi-Intanethi, kubandakanya ukubukela iividiyo ezikumgangatho ophezulu, ukudlala imidlalo ekwi-Intanethi, ukukhangela kwiwebhu kunye nokufunda okungakumbi malunga impumelelo kwezobuchwepheshe. Ungakholelwa kwintengiso. Soloko ujonga uphononongo lwe-Intanethi kwaye wenze olwakho uvavanyo. Xa uvavanya isantya senkonzo yeVPN kwikhompyuter, yenza iimvavanyo ezininzi ngamaxesha ahlukeneyo emini.
Price -Ufanele ukulungele ukuchitha imali ukuze usebenzise eyona VPN. Iinkonzo zasimahla zinokulungela ukusetyenziswa ngexesha elinye, kodwa zishiya zinqweneleka xa zisetyenziswa yonke imihla. IiVPNs zasimahla zeekhompyuter zeWindows kunye neMac zihlala zinendlela engqongqo yokuhamba okanye isantya. Iindaba ezimnandi zezokuba uninzi lwababanikezeli be-VPN beePC bayakuvumela ukuba uvavanye inkonzo, uvavanye ukusebenza kwayo, kwaye ukuba kukho into engahambanga kakuhle, uza kubuyiselwa imali.
Ukuphononongwa kwabathengi kunye neengcali kunokuba luncedo xa ukhetha phakathi kokunikezelwa okufanayo. Ezinye zezona zinto zibaluleke kakhulu ezichonga ukuba inkonzo ye-VPN ilungile okanye imbi ibonakala kuphela emva kweeveki kunye neenyanga zokusebenzisa. Jonga i-pros and cons, kwaye ugxeke. Akukho 100% yenkonzo egqibeleleyo, kodwa kusafuneka ukhethe eyona ifanelekileyo kuba iiVPNs kunjalo iteknoloji yexesha elizayo.
Ndiyakhetha ExpressVPN kuba ineendawo zeseva ezili-160 kumazwe angama-94, isebenzisa ukubethela okungama-256-bit, ineeapps ezenza ukuba indawo yakho ibe ngcono, kwaye inexabiso kunye nenkxaso enkulu. Ngokukhawuleza xa ndivula iMac yam okanye ndiqhagamshela kwinethiwekhi kwi-iPhone yam, ndibona i-VPN iqhagamshela kwaye ndivuka ndibaleka! Akukho mfuneko yokuba ndenze nantoni na ukuqwalasela okanye ukudibanisa nangaliphi na ixesha… konke kuyazenzekelayo.
Fumana iintsuku ezingama-30 simahla nge-ExpressVPN
Ukubhengezwa: Ndifumana iintsuku ezingama-30 simahla kwi-ExpressVPN kumntu ngamnye osayinayo.
tags: ExpressVPNisysharkkwitonelaintanethi yangaseseVpnYintoni iyintoni i-vpn
Imiba ePhakamileyo yoMthetho ngeBlogging